Izincomo zobuchwepheshe ongazinikeza ngosuku lwezithandani | Izindaba zamagajethi
Izincomo zobuchwepheshe ongazinikeza ngoSuku Lwezithandani
UPaco L Gutierrez | | Amazon, Gadgets, General
Izindlela usuku luka-Valentine, usuku esiluthandayo noma esiluthandayo lukhonjisiwe ekhalendeni kubo bonke labo abanomlingani futhi okufanele bafune isipho. Into ejwayelekile kungaba ukunika izimbali noma ushokoledi, kepha Uma, njengoba ngithanda wena, uthanda ubuchwepheshe, impela ucabanga ukwenza isipho soqobo kumlingani wakho. Impela kunamagajethi amaningi noma amadivayisi angakwenza ujabule noma uwadinge futhi awunawo okwamanje.
Kunezinhlobonhlobo eziningi ze- imikhiqizo kagesi, yazo zonke izabelomali kanye nazo zonke izidingo, futhi lapha sizobona futhi sizazise eziningi zazo esingazinikeza njengesipho kozakwethu, singahamba ngaso sonke isikhathi nesidlo sasemini noma ezinye izimbali kunjalo, kepha impela uma uzithola kahle uzolukhumbula lolo suku isikhathi eside, ngoba ubuchwepheshe sebuyingxenye yezimpilo zethu. Lapha ngishiya izincomo zami kusuka enanini eliphakeme kakhulu kuye entengo ephansi yezipho zosuku luka-Valentine.
1 I-Smartphone ozoyithanda:
1.2 I-Samsung Galaxy Note 10
1.3 I-OnePlus 7T
1.4 I-LG G8S
1.5 I-Huawei P30 Lite
1.6 Xiaomi Redmi Qaphela i-8
2 Okugqokekayo esikwazisa njalo:
2.1 I-Apple Watch Series 3
2.2 UKygo A11 / 800
2.3 I-Huawei FreeBuds 3
2.4 Ama-Apple Airpods
2.5 I-Huawei Watch GT
2.6 I-Xiaomi Amazfit Bip lite
2.7 UXiaomi Airdots
3 Amagajethi nezinsiza:
3.1 I-Oral-B Genius X 20000N
3.2 IHuawei Mediapad T5
3.3 I-Kindle Paperwhite
4 Isipikha Esihlakaniphile Sivuke
4.1 I-Amazon Echo Bonisa i-5
4.2 Isiteshi sokushaja esingu-3-in-1
4.3 Uhlaka lwesithombe sedijithali se-NIX Advance
4.4 Ububanzi beSonos One
I-smartphone ngokungangabazeki iyindatshana yezobuchwepheshe ngokugqama, sonke siyayidinga futhi siyiphatha amahora angama-24 ngosukuKunezinhlobonhlobo eziningi zamamodeli, futhi kuya ngokuya kuba nzima ukukhetha okungcono kakhulu kithi phakathi kokukhethwa kukho okuningi, lapha sizothola okunconywe kakhulu kusuka kokumba eqolo kuya kokungabizi kakhulu ngalolu suku luka-Valentine.
Kulo nyaka i-Apple isimangazile ngokwethula i-terminal evelele ngokuba ne- ikhwalithi yamanani kuhle kakhulu, akuyona eshibhe futhi ayibizi kakhulu kepha ivelela ezintweni eziningi. Iprosesa enamandla kakhulu esingayithola ku-Smartphone, ikhamera ephezulu ekwazi ukuthatha izithombe ezinhle kakhulu nokuzimela okungenamkhawulo. Ngicabanga ukuthi kunjalo inketho enconywe kakhulu uma lokho esikufunayo kuyi-iPhone.
Lapha singakuthola ku- Amazon enguqulweni yayo engu-64gb, 128gb kanye no-256gb. Intengo yayo yamanje iqala ku- € 809.
I-Samsung Galaxy Note 10
Isiginali engcono kakhulu maqondana ikhwalithi yamanani ukuthi i-Samsung inekhathalogi yayo ebanzi ngokungangabazeki le Nothi 10, ngoba yabelana ngemininingwane eminingi nomfowabo omdala futhi inikeza usayizi ovinjelwe ngokwengeziwe nentengo eguqulwe kakhulu. Sinayo ngemibala ehlukahlukene, futhi kuqinisekile ukuthi akufanele idumaze njengesipho njengoba ingubuchwepheshe obuhle kakhulu obutholakala kuqhasha waseKorea.
Lapha singakuthola ngokunikezwa ku Amazon enguqulweni yayo engu-256gb. Intengo yayo yamanje ingama- € 705.
I-OnePlus idume ngokunikela amadivayisi ekuphakameni kwe- "ngobukhulu" ngentengo engcono, yize kuyiqiniso lo mehluko wamanani wehlisiwe ngokuhamba kwesikhathi njengoba i-OnePlus ibilokhu ifaka izinto ezingcono nobuchwepheshe obungcono ezikhumulweni zayo, kuze kube sezingeni lokuthi kube yisilinganiso salabo abathanda I-Android isesimweni sayo esimsulwa. Isibonisi esingu-90-intshi Amoled 6,55Hz, iprosesa enamandla kakhulu we-Snapdragon kanye nesethi yamakhamera ezojabulisa ama-gourmets amaningi wokuthwebula izithombe.
Lapha singakuthola ku- Amazon enguqulweni yayo engu-128gb. Intengo yayo yamanje ingama- € 617.
Kubukeka sengathi LG Sehle kancane empini emkhakheni wezocingo kepha ngonyaka odlule kusimangazile ngama-G8s, i-terminal esezingeni eliphakeme ejabulela i-hardware ehamba phambili ngentengo yokudiliza. Kuyisiphetho esihle kakhulu esenziwe ngensimbi nengilazi, sihambisana namakhamera we-solvent, isikrini esikhulu se-oled esenziwe yi-LG futhi kungenziwa kanjani ngenye indlela a isigaba somsindo lapho sigqama ngaphezu kwawo wonke umncintiswano.
Lapha singakuthola ku- Amazon enguqulweni yayo engu-128gb. Intengo yayo yamanje ingama- € 425.
I-Huawei P30 Lite
IHuawei ibonakala ngokuhlala inikela ngekhwalithi ephezulu kuyo yonke imikhiqizo yayo futhi kuyahlonishwa ukuthi ihlala ikwenza lokho ngentengo engaphezu kokushintshiwe, kulokhu sikhuluma ngomfowabo omncane weHuawei p30 kepha hhayi lokho okuhle. Itheminali yesikrini sonke enedizayini ye-Premium, ephelezelwa enkulu Isikrini sekhamera engu-6,15-intshi 4 lokho kuzokwenza uthathe isithombe esihle kunazo zonke kunoma yisiphi isimo. Ekuhlanganisweni komhlaba wonke yiTheminali ephezulu kakhulu kunentengo yayo engakhombisa, elula, entofontofo esesandleni, ene- ukubonwa okuhle kobuso ne-NFC. Lesi siginali esimnandi sinazo zonke izinsizakalo ze-Google.
Lapha singakuthola ku- Amazon. Intengo yayo yamanje yehliswe cishe ngama- € 150, okuyi- € 205
UXiaomi akakwazanga ukuphuthelwa ohlwini olunconyiwe futhi uluthole ngokufaneleka kwakhe selokhu waba yilo ubuhle bomkhiqizo uma lokhu esikufunayo kungenzi umonakalo omkhulu ku-akhawunti yethu yasebhange. Ngenxa yentengo yayo, kungahle kubonakale sengathi kungukugcina okuphansi, kepha kungukugcina okuphakathi nendawo okwazi ukwenza noma yikuphi ukusebenza ngaphandle kwenkinga, noma ukudlala imidlalo yamanje kakhulu futhi izigubhu ziyintokozo. Ngeke ube nokusebenza okuhle kakhulu noma izithombe ezinhle kepha ngokuqinisekile kungaphezu kokwanele uma ungumsebenzisi ongafuneki kangako.
Lapha singakuthola ku- Amazon enguqulweni yayo engu-64gb. Intengo yayo yamanje ingama- € 167.
Okugqokekayo esikwazisa njalo:
Kulabo abangabazi ubuchwepheshe obugqokekayo kubhekiswa ku- izinto ezisetshenziswa nsuku zonke esihlala siphethe ezine-microprocessor efakiwe. Singaphila ngaphandle kwabo kepha bayasisiza ukuthi sithuthukise usuku nosuku futhi mhlawumbe iningi labo libe yinto enjalo kubalulekile njenge-smartphone. Lapha sizobona okunconywe kakhulu kusuka kubiza kakhulu kuya kokonga kakhulu.
I-Apple ibusa kakhulu kweminye imikhakha yezobuchwepheshe kanti omunye wayo yiSmartwatch, le modeli akuyona eyamanje kakhulu noma enezinketho eziningi, kodwa iwashi elihlakaniphile elihlanganisa bonke ubuchwepheshe esibudingayo nsuku zonke, ukwakhiwa okuhle kakhulu nokuklanywa kwe-apula okujwayelekile. Sizoba nayo ukumelana namanzi, i-GPS edidiyelwe nenkumbulo yangaphakathi ukugcina umculo wethu uma kwenzeka sifuna ukuphuma siyokwenza ezemidlalo ngaphandle kwe-iPhone kithi. Ihambisana kuphela ne-iPhone.
Lapha singakuthola ku- Amazon enguqulweni yayo engu-38mm GPS. Intengo yayo yamanje ingu- € 229.
UKygo A11 / 800
Ngemuva kwalokho zihlaziye lapha ngokujula, singasho ngokuphepha ukuthi lawa ma-headphone avela ku-brand yodumo uKygo angaba kwama-headphone akhansela izindlebe amahle kakhulu umsindo wemakethe. Imayelana ne- Umkhiqizo we-Premium ukuthi ama-gourmets amaningi womculo nomculo azowathokozela, ngoba ane- kokukhanselwa komsindo okuhle kakhulu esingakuthola namuhla emakethe, elungiselelwe kalula futhi enezinketho zokulinganisa eziningi, konke okuhambisana ne- ukuzimela okumangalisayo. Mhlawumbe izinto zokwakha azizona eziteleka kakhulu kepha kakhulu, kakhulu ukwethuka noma ukumelana nokudonsa, ngoba umqondo wamahedfoni angenantambo ukukwazi ukuwahambisa noma yikuphi ngaphandle kokwesaba ukuthi angawohloka.
Lapha singabathola ku- Amazon. Intengo yayo yamanje ingama- € 249.
I-Huawei FreeBuds 3
Ngemuva kokuzihlola nokuzihlaziya Lapha singakusho lokho UHuawei ushaye itafula kulokhu ukhipha enye yama-headphone we-TWS angcono kakhulu angatholakala emakethe ngemali engaphansi kwama- € 200. Azishibhile kepha ikhwalithi yazo iqinisekisa intengo yazo, ukukhanselwa komsindo okusebenzayo, ngakho-ke nabo lapho sizozwa ukucwiliswa ngokuphelele kokuqukethwe okuzwayo esikuthokozelayo. Banikela nge- ukuhlanganiswa ngokuphelele ne-Huawei ecosystem kodwa zihambisana ngokuphelele nanoma iyiphi idivayisi ye-bluetooth, zinomklamo omuhle futhi zakhiwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, a ukuzimela kwezilwane nokushaja okungenantambo izindawo zokujola ukuze zihlale zinamandla anele. Manje ekwenyuselweni kufaka phakathi ishaja engenantambo ongayithenga.
Lapha singabathola ku- Amazon. Intengo yabo yamanje ingu- € 179 futhi bafaka ishaja yamahhala engenantambo.
Lawa ma-headphone angenantambo avela ku-Apple ngokungafani newashi elihlakaniphile ziyahambisana nawo wonke amadivayisi we-bluetooth ngaphandle komkhiqizi noma uhlelo lokusebenza. Inikeza ukwakheka okunobungane kakhulu nganoma iyiphi indlebe futhi akudingekile ukuthi ukufake emgodini wamehlo njengoba kwenzeka ngobuningi bomncintiswano. Uma ungumsebenzisi we-Apple uzoba nezinzuzo ezithile ezifana ne- Xhumanisa ne-ID yakho ezovumelanisa ngokuzenzakalela nawo wonke amadivayisi akho. Ithembeke kakhulu ngekhwalithi yabo yomsindo futhi ikakhulukazi ekusebenzeni kwabo okuhle, ngaphandle kokunqanyulwa okungafanelekile.
Lapha singabathola ku- Amazon enguqulweni yayo ngaphandle kokushaja okungenantambo. Intengo yayo yamanje ingu- € 139.
I-Huawei Watch GT
I-smartwatch sesizukulwane sokugcina esikhulu samaShayina ingenye yamawashi amahle kakhulu emakethe, ivelela ukuzimela kwayo okuhle futhi imisebenzi eminingi yezemidlalo. Inokuphathwa okuhle kwezaziso ezizosisindisa ezikhathini eziningi ukufinyelela efonini yethu ephathekayo futhi okuhle kunakho konke lokho Ngokungafani nemodeli ye-Apple, iyahambisana nabo bonke abakhiqizi, ngisho ne-iPhone uqobo.
Lapha singakuthola ku- Amazon enguqulweni yayo Yemfashini. Intengo yalo yamanje itholakala ngo- € 99.
I-Xiaomi Amazfit Bip lite
Kuzo I-smartwatch eshibhile kaXiaomi, kodwa engenamandla amancane, ngoba inazo zonke izinzwa zokulawula ukuzivocavoca umzimba kwethu ekuqeqesheni kwethu, futhi inokuphathwa kwezaziso, kepha lezi azinakuphendulwa, futhi singabona ukuthi ngubani osibizayo kepha uzosivumela ukuthi senqabe ucingo. Kuyithuluzi elilinganiselwe kepha lokhu kunezinzuzo zalo, ngoba sizojabulela i- ukuzimela cishe kwezinsuku ezingama-35 zokusetshenziswa okungaphazanyiswa, singalala naye ukulawula ukulala kwethu. Isikrini sayo sinokuhluka okuhlukile futhi ukuthi ubuchwepheshe obwenza ukukhanya okuthe xaxa kube kubukeka kangcono, ngakho-ke izosivumela ukuthi siyibone kangcono ekukhanyeni kwelanga, ngokungafani nomncintiswano.
Lapha singakuthola ku- Amazon kunguqulo yayo kuphela. Intengo yayo yamanje ingama- € 59.
Ama-headphone we-Xiaomi par ubuhle abenzelwe ukuncenga emakethe yethu kepha ekugcineni ayathengiswa, futhi kuyahlonishwa ukuthi umkhiqizo onconywe kakhulu, inezilawuli zokuthinta futhi iyahambisana nanoma iyiphi idivayisi, singakwazi nokwethula umsizi we-google. Abafinyeleli ezingeni lama-Airpods noma ama-Galaxy Buds kepha bayakufakazela ngentengo eguqulwe kakhulu ebenza babe yisipho esikhangayo kakhulu ngoba banomklamo omuhle kakhulu oqinisekile ukuthandwa yinoma yimuphi umsebenzisi ofuna ukulalela. umculo ngaphandle kwezintambo.
Lapha singabathola ku- Amazon. Intengo yayo yamanje ingama- € 40.
Kusobala ukuthi ama-Tocho amaningi esesivele siwabonile kepha umlingani wethu kungenzeka ukuthi usenazo zonke lezo zinto esesizishilo futhi abakudingayo kungenye into, lapha sizobona uchungechunge lwamagajethi abangawathanda futhi babe izinto zansuku zonke.
I-Oral-B Genius X 20000N
Lokhu isixubho ukuthi kakade sihlaziya laphaAkusilo nje isixubho sikagesi, liyibhrashi lamazinyo eliSmart. Impela munye wamabhulashi wamazinyo amahle kakhulu esingawathenga namuhla, ngezizathu ezahlukahlukene kufaka phakathi i- ukuxhumeka ku-iOS yethu noma i-Android smartphone, lokhu kusinikeza ulwazi oluningi mayelana nokuxubha kwethu ngaleyo ndlela kusize ukuthi umlomo wethu uhlanzeke ngangokunokwenzeka kusukela kuleli bhulashi kuzokwazisa unomphela nge-smartphone yakho. Idizayini yayo yePremium ngeke ishiye noma ngubani engenandaba, futhi nayo ibhethri elishajekayo kusinikeza ukuzimela okuhle. Kungumkhiqizo esiwusebenzisa nsuku zonke futhi ngokuqinisekile siyayazisa le mfanelo eyengeziwe.
Lapha singakuthola ku- Amazon. Intengo yayo yamanje itholakala nge- € 173
IHuawei Mediapad T5
Ithebhulethi kaHuawei enezinga eliphakeme lekhwalithi / lentengo emakethe, nge isikrini esingu-10 intshi kuzoba kuhle ukuphequlula, bukela uchungechunge ku-Netflix noma udlale imidlalo, kukhona amaphilisi anamandla amakhulu kepha ngicabanga ukuthi lokhu kungaphezu kokwanele ukujabulela konke okuqukethwe kwe-multimedia noma ukudlala imidlalo ethandwa kakhulu. Ifaka iprosesa elincane elenziwe yiHuawei futhi 2gb inqama futhi uhlelo lwakho lokusebenza yi- Android, ngakho-ke sizoba nazo zonke izinhlelo zokusebenza ku-Google Play.
Lapha singakuthola ku- Amazon. Intengo yayo yamanje ingu- € 139
I-e-book yama-Amazon ithi umkhiqizo we-quintessential wabalandeli wokufunda, njengoba thina ikuvumela ukuthi uphathe zonke izintandokazi zakho kudivayisi efanayo. Le divayisi ayifani nama-Smartphones noma amaphilisi ayivezi ukukhanya okwesibhakabhaka ngakho-ke sigwema kokubili ukungaboni ngamehlo nokuphazamiseka kokulala lapho ufunda kusikrini sakho. manje ngesibani sangaphambili esishintshekayo, ukuze ufunde noma kuphi nanoma nini lapho ufuna khona. I-Kindle yakho yenzelwe ukufundwa futhi inesikrini sokuthinta esiphakeme kakhulu esifundeka njengephepha eliphrintiwe. ngaphandle kokucabanga, noma kukhanya ilanga. Ukukhokhiswa okukodwa kungasinika i- ukuzimela kwamasonto y Uma uyikhasimende eliyinhloko le-Amazon sizoba namakhulu ezincwadi mahhala.
Lapha singakuthola ku- Ayikho imikhiqizo etholakele.. Intengo yayo yamanje ingama- € 89.
Isipikha Esihlakaniphile Sivuke
Lewashi le-alamu elihlakaniphile elivela ku-Energy Sistem esivele ikhona ake sihlaziye lapha, sayithanda kakhulu ngakho konke enikunikezayo. Sinomkhiqizo onomklamo omncane kanye ne isibonisi esikhulu sangaphambili se-LED, ingxenye engenhla equkethe Ubuchwepheshe be-Qi bokushaja okungenantambo amadivayisi wethu ahambisanayo. Kepha into ayigcini lapho ngoba leli washi le-alamu linalo Izipikha ze-2.0 nemakrofoni ezi-2 ukusetshenziswa kwe U-Alexa (umsizi wezwi we-Amazon). Kukhona nokunye okuningi, futhi sinokuxhumana i-bluetooth, i-wifi nobuchwepheshe obufana ne-AirPlay kusuka ku-Apple ukwenza lula ukuxhumana namadivayisi wakho we-apula. Le divayisi iyi- iyahambisana ne-iOS ne-Android.
Lapha singakuthola ku- Amazon. Intengo yayo yamanje ingama- € 79.
I-Amazon Echo Bonisa i-5
I-Amazon ikhule kakhulu, njalo uma inikela ngezinsizakalo ezingaphezulu nezingcono. Enye yezinto ezithandwa kakhulu namuhla Alexa, umsizi wakho wezwi, uya ngokuya ehambisana nazo zonke izinhlobo zamadivayisi, kusuka kumathelevishini kuya kuma-smart bulbs noma amalambu. Ukuze sisebenzise lo msizi, sinezikhulumi ezahlukahlukene ezahlukahlukene, kepha kukhona okugqame kwabanye. Le yi-Echo Show 5, Ngaphandle kokuba yisipikha kunesikrini esincane esingu-5,5 lokho kuzosivumela ukuthi sibuke okuqukethwe okufundisayo, yenza amakholi wevidiyo noma ubuke amavidiyo we-YouTube noma we-Amazon Prime Video. Lapha Ngikushiya a I-Análisis lokho esivele sikwenza.
Lapha singakuthola ku- Amazon. Intengo yayo yamanje yokuthengisa ingu- € 69,99.
Isiteshi sokushaja esingu-3-in-1
Sinamadivayisi amaningi ngokwengeziwe anebhethri elihlanganisiwe futhi elinengxenye yalo enhle kanye nengxenye yalo embi. Okuhle ukuthi singakwazi ukwenza ngaphandle kwamabhethri, okubi ukuthi kuzodingeka sazi ukuthi banamacala okukhokhela ukuze bangabi senkingeni, ngoba amanye amadivayisi anokuzimela okuncishiswe kahle. Ngalesi sisekelo sokushaja singakwazi shaja kuze kufike kumadivayisi ama-3 ngasikhathi sinye, yenzelwe ukusetshenziswa ne- i-iPhone, amanye ama-AirPod kanye ne-Apple Watch kodwa futhi wonke amadivayisi ahambisanayo we-Qi angakhokhiswa. Kungaba yinto ebaluleke kakhulu etafuleni lethu eliseceleni kombhede.
Lapha singakuthola ku- Amazon. Intengo yayo yamanje ingama- € 29,99.
Uhlaka lwesithombe sedijithali se-NIX Advance
Sonke sithanda ukungafisi izikhathi ezibalulekile empilweni yethu, ukuzikhumbula noma ukuzaba, kuya ngokuya kuncipha ukuphrinta izithombe ngoba zimbalwa izikhungo ezinikele, kepha njengamanje kunezindlela ezahlukahlukene zokujabulela noma share yalezi zithombe esizithathile. Ngale luhlaka lwedijithali sizoba nezethu izithombe ezijikeleza njalo ngokumane uxhume i-pendrive noma ikhadi le-Sd eliqukethe izithombe. Ngaphandle kwalokho Ifaka iwashi nomsebenzi wekhalenda.
Lapha singakuthola ku- Amazon. Intengo yayo yamanje yokuthengisa ingu- € 49,99.
Ububanzi beSonos One
ISonos isilethela omunye umkhiqizo esingeke siyeke ukuwuncoma, manje sesikhuluma ngeSonos One, enye yezinkampani ezihlangene kakhulu futhi eshibhe kunayo yonke kodwa okuyiyona ngokuyinhloko ebazuzele udumo oluningi. Sithola umsindo onamandla hhayi kuphela kepha wekhwalithi ephezulu kakhulu engaphansi kwama-euro angama-200. Sine njengoba kunoma iyiphi I-Sonos: I-AirPlay 2, i-Spotify Connect nohlelo lwayo lokusebenza kanye nezici ze-multiroom yenkampani, kepha okuningi.
Thenga iSonos One
Sikhuluma ngezipika ezihlakaniphile, ngakho-ke le Sonos One ngokusobala iyahambisana ne-Apple HomeKit, iGoogle Home ne-Amazon Alexa. Ngomunye wemikhiqizo yomsindo ehlakaniphile osinikeze imizwa emihle eminyakeni yamuva futhi asikwazi ukuyeka ukuyincoma manje njengoba intengo yayo Isuka kuma-euro angama-189 zombili kunguqulo yayo emhlophe nakuhlobo lwayo olumnyama. Uma ufuna ukwenza isipho sangempela kulo Khisimusi ngesipikha esihlakaniphile, ngaphandle kokungabaza le Sonos One ayinayo imikhawulo maqondana nepulatifomu (enobungane kakhulu ne-iPhone futhi ikakhulukazi ne-Alexa).
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izincomo zobuchwepheshe ongazinikeza ngoSuku Lwezithandani
Ungabona kanjani indawo lapho sithathe khona isithombe nefoni yethu
Ama-Oscars 2020: Uyilandela kanjani i-gala nakho konke ukuphakanyiswa